I-3D eqingqiweyo yamatye-udonga kunye nobugcisa- I-Morningstar Stone Co, Ltd.
Ipateni emhlophe yeSivec yesitayile esingaqhelekanga se-3D eludongeni olukroliweyo
Eli nyathelo libalulekile kwaye libalulekile kuwo onke amanyathelo alandelayo. Iibhloko zetyhubhu zamatye kunye namatye ahanjiswayo asasazwa ngokubanzi izinto ezilungele ukulungiswa. Ukukhethwa kwezinto kuya kufuna ulwazi olucwangcisiweyo lwabalinganiswa bezinto kunye nokusetyenziswa kunye nengqondo ekulungeleyo ukufunda nayiphi na into entsha. Ukuhlolwa okuneenkcukacha kwezinto ezibonakalayo kubandakanya: ukurekhodwa kwemilinganiselo kunye nokujonga imbonakalo yomzimba. Yinkqubo yokhetho kuphela eyenziweyo ngokuchanekileyo, imveliso yokugqibela inokutyhila ubungakanani bayo kunye nexabiso lesicelo. Iqela lethu lokuthenga, lilandela inkcubeko yenkampani yokuvelisa iimveliso ezisemgangathweni kuphela, lilunge kakhulu ekufumaneni nasekuthengeni izinto ezisemgangathweni ophezulu.
CNC nangokukrola ▼
Oomatshini kushishino lwamatye kwenzeke kungekudala. Kodwa iyonyuse kakhulu ishishini. Ingakumbi oomatshini be-CNC, bavumela usetyenziso ngakumbi kunye noyilo lwamatye endalo. Ngoomatshini be-CNC, inkqubo yokukrola ilitye ichanekile kwaye iyasebenza
Zonke iimveliso ezigqityiweyo ziyacelwa ukuba zidityaniswe ngaphambi kokushiya izityalo ezenziweyo, ukusuka kwiipaneli ezisikiweyo ezilula ukuya kwiipateni ze-CNC ezikroliweyo kunye neepateni zamanzi. Le nkqubo ihlala ikhankanywa njengendawo eyomileyo. Indawo eyomileyo eyomileyo yenziwa kwindawo evulekileyo engenanto kunye nelaphu elithambileyo lefayibha kumgangatho kunye nemeko efanelekileyo yokukhanyisa. Abasebenzi bethu bazakubeka phantsi iipaneli zemveliso yokugqiba kwimigangatho ngokokuhombisa ivenkile, esinokuthi sikwazi ukujonga ngazo:
1) ukuba umbala uyahambelana ngokwendawo okanye isithuba;
2) ukuba i-marble isetyenziselwa indawo enye inesitayile esinye, kwilitye elineemithambo, oku kuyasinceda ukujonga ukuba ulwalathiso lomthambo lubhukishwe okanye luyaqhubeka;
3) ukuba kukho naziphi na iziqwenga ezisikiweyo kunye neziphuliweyo ezinokulungiswa okanye ukutshintshwa;
4) ukuba kukho naziphi na iziqwenga ezineziphene: imingxunya, amabala amnyama amakhulu, ukugcwaliswa kobutyheli ekufuneka kutshintshwe. Emva kokuba zonke iipaneli zihlolwe kwaye zibhalwe. Siza kuqala inkqubo yokupakisha
Sinecandelo lokupakisha elikhethekileyo. Ngesitokhwe esiqhelekileyo somthi kunye nebhodi yeplywood kwifektri yethu, siyakwazi ukwenza ngokwezifiso ukupakisha kuhlobo ngalunye lweemveliso, nokuba zisemgangathweni okanye aziqhelekanga. Ukupakisha kwabasebenzi kwimveliso nganye ngokujonga: umthwalo olinganiselweyo wokupakisha nganye; ukuba anti-skid, anti-ukungqubana & shockproof, manzi. Ukupakisha okukhuselekileyo kunye nobuchwephesha sisiqinisekiso sogqithiso olukhuselekileyo lwemveliso egqityiweyo kubathengi